" Sababtoo ah oo ka mid ah arrimaha Wi-Fi, waxaan u baahan yihiin in ay qaataan aan iPhone in Verizon ee is-dhaafsiga. Waa mid aad u baahan yahay si loo tirtiro dhammaan xogta ku iPhone. Si kastaba ha ahaatee, waan ku maqlay in la soo celiyo oo kaliya ma ka saari karaan dhammaan macluumaadka shakhsinimo oo ka iPhone . Waxaan u baahanahay si ay u tirtirto xogta iPhone aan soo celiyo. Qof kasta waa ogyahay sida loo sameeyo? Fadlan caawi, mahad! " -Helen
Dadka qaar waxay ka cabsadeen reer macluumaad shakhsi lagu soo kabsaday dadka kale xitaa la iPhone soo celiyo. Dadka qaar waxay u baahan tahay oo kaliya in ay masixi macluumaad qaar ka mid ah shakhsi ka iPhone ah, halka celinta iPhone ka dhigi doonaa oo dhan khasaaro xogta. Haddii aad ku jirtid mid ka mid ah ku xusan 2 xaaladda, waxaan jeclaan lahaa inaan ku talinaynaa in aad isku daydo SafeEraser Wondershare si joogto ah u tirtirto xogta iPhone aan soo celiyo. Waxaa jira fursado dhowr ah si aad u tirtirto xogta iPhone:
Masixi Data Private: Xulo tirtirto xogta gaarka ah ka iPhone aan soo celiyo;
Masixi tirtiray Files: joogto ah ka saar, kuwaas oo files aad tirtiray aad iPhone;
Masixi All Data: tirtirto dhammaan xogta ku saabsan iPhone oo u qotomiyey sidii phone cusub;
Taageer macruufka cusub 9, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus / 6 / 5s / 5/4;
Waxaad kala soo bixi kartaa Wondershare version maxkamad SafeEraser ay u fiiriyaan sida ay u shaqayso. Waa technology heerka military si ay u destory xogta looga hortago doonaa xogta aad ka soo kabsaday ama xaday.
Sida loo isticmaalo SafeEraser Wondershare in ay tirtirto xogta iPhone aan soo celiyo
Tallaabada 1. Download iyo rakibi SafeEraser Wondershare on your computer. Wondershare SafeEraser for Windows PC iyo Wondershare SafeEraser u Mac labadaba waa la heli karaa. Sida laga soo xigtay nidaamka qalliinka computer aad, aad u hesho version saxda ah. Connect aad iPhone la your computer via cable USB ah. Marka xiran si guul ah, waxaad ka arki kartaa magaca iPhone ka muuqan dhanka bidix ee sare ee barnaamijka.
Tallaabada 2. Dooro feature in ay tirtirto xogta iPhone sida ay baahidaada.
Xulashada 1 masixi Private Data aan soo celi,
Xogta gaarka ah waxaa ka mid ah macluumaadka la tirtiro, khasnado Safari, taariikhda Safari, cookies Safari, khasnado keyboard, fariin, lifaaqyada fariin, wac taariikhda, qoraalo, sawiro iyo. By gujinaya 'masixi Private Data', markaas barnaamijkan iskaan doonaa iPhone xogta gaarka ah. Ka dib markaas, waxaad eegista tirtiri kartaa macluumaadka aan loo baahneyn, oo aan dib u soo celinta aad iPhone.
Xulashada 2 masixi tirtiray Files aan soo celi,
Doorashadan waxa loo isticmaalaa in lagu tirtiro, kuwaas oo files aad tirtiray aad iPhone. Marka aad tirto faylasha qaar, ay saaro meesha asalka ah, laakiin ay weli ka jiraan meel aad iPhone. Software-kabashada, sida Wondershare Dr.Fone, soo kaban karo files tirtiray. Si aad u masixi files, kuwaas oo gabi ahaanba ka iPhone, waa in aad doorato muujinta ah ee 'masixi tirtiray Faylal ay' on SafeEraser. Files tirtiray laga tirtirayaa karaa waa farriimo, iMessage, xiriirada, wac taariikhda, facetime, jadwalka taariikhda, xusuusinta, qoraalo, Bookmarks Safari, sawiro, iyo videos.
Xulashada 3 masixi Dhammaan Macluumaadka aan soo celi,
Doorashadan waxa waxaa si gaar ah loogu talagalay dadka isticmaala kuwaasoo doonaya inay iibin ama ha iska iPhone ay. By isticmaalayn doorasho, dhammaan xogta, ay ka mid yihiin fariimaha, wac taariikhda, facetime, xiriirada, mail, jadwalka taariikhda, xusuusinta, qoraalo, Deymaha maqan cod, Bookmarks Safari, sawiro, videos, barnaamijyadooda, goobaha nidaamka, khasnado keyboard, passbook, Lugood DB, iMessage , ugu cadcad Safari, taariikhda Safari, farriinta, ID Apple, ID iCloud, xarunta ciyaarta, khariidado Apple, cimilada, kaydka, iyo newsstand waa la tirtiri karaa ka iPhone.
> Resource > iPhone > Sida loo Delete iPhone Data aan soo celi,